> Resource> Free> Top 5 Best Free MOV Video Joiners
Mgbe ọ na-abịa video edezi, i nwere ike mkpa a video joiner-enyere gị aka jikọọ dị iche iche nke na obere vidiyo. A bụ ndepụta nke n'elu 5 free MOV joiners-enyere gị aka mfe nweta na.
Kate si Video joiner
Free Video cutter joiner bụ a free video ngwá ọrụ nke-enye gị bee ma sonyere video faịlụ dị iche iche formats. Ọ na-enye a n'ụzọ kwụ ọtọ ngwọta mgbe ị kwesịrị bechapụ a nke si a video faịlụ ma ọ bụ sonyere ọtụtụ videos ọnụ. Ọ na-arụ ọrụ a dị nnọọ mfe n'ụzọ na-eji interface na-eme ka usoro mfe na-ebu si.
Mfe na bara uru interface;
Easy-eji na ike.
Ọ dịghị wuru na-video ọkpụkpọ;
Ohere dị oke obere na-apụghị resized.
Video toolbox bụ ihe nile-na-otu online video edezi ngwá ọrụ iji nyere gị mfe dezie gị video. Na ya, ị nwere ike mfe jikota multiple faịlụ n'ime otu video track. Ọ na-akwado niile video formats (3GP, AMV, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, M4V, MP4, MPEG, mpg, RM, VOB, WMV) na-enyere gị aka ime mgbanwe elu ntọala dị ka video na ọdịyo codec , mkpebi, bit ọnụego, etiti ọnụego.
Nwere faịlụ mmachi (600 MB).
Kate si Video joiner bụ a free ngwá ọrụ iji nyere gị aka sonyere abụọ ma ọ bụ karịa videos n'ime otu onye. Ọ na-akwado dị iche iche video formats gụnyere AVI, WMV, MOV, MPEG na ọtụtụ ndị ọzọ, otú ị na-adịghị mkpa multiple mmemme iji tọghata videos tupu isonyere.
Na-akwado dị iche iche video formats;
Nwere ike mkpa ka i mee email registration.
Free Video joiner bụ ihe dị mfe na-eji video isonyere ngwá ọrụ nke na-akwado iche iche iche iche nke videos gụnyere AVI, WMV, MOV, MP4 na ndị ọzọ. Na ya, ị nwere ike mfe sonyere akparaghị ókè ọtụtụ video faịlụ dị iche iche formats. Ozugbo ị na-eme, ị ga-enwe ike na-egwu nile vidiyo ị sonyeere ọnụ dị ka ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị otu onye. Na-arụ ọrụ ngwa ngwa na-eme na àgwà nke video.
Akwado ọtụtụ video formats;
Mfe iji interface.
Ọ na-adịghị abịa na a media ọkpụkpọ.
Ọ bụ ezie na ọ bụ a free video nchịkọta akụkọ, VSDC Video Editor anya na-ele dị nnọọ ka a ọkachamara otu. O nwere otu ụdị usoro iheomume edezi ịke na-ahapụ gị ikpokọta multiple obere vidiyo dị iche iche formats, tinye ikwu n'ụzọ, na-aza ha n'ime a zuru ezu oru ngo.
Nwekwara ike-eji dị ka a video Ntụgharị.
Kọmputa ego (CPU na Ram) na-achọrọ na a elu larịị.
Ọ bụrụ na ị chọrọ a ọzọ ndị ọkachamara MOV video joiner, Wondershare Video Editor ukwuu tụrụ aro. Ọ na-akwado a dịgasị iche iche nke video formats gụnyere MP4, FLV, MOV, AVI, WMV na ndị ọzọ. Na ya, ị pụrụ isonyere dị iche iche videos ọnụ na dị nnọọ ole na ole clicks. Agbakwụnye ikwu n'ụzọ na ndị ọzọ na mmetụta na-akwado.